Antenimierandoholona : ho fizarana seza fotsiny ny toeran’ny mpanohitra | NewsMada
Antenimierandoholona : ho fizarana seza fotsiny ny toeran’ny mpanohitra
Hanao ahoana ny ho toeran’ny mpanohitra eo anivon’ny Antenimierandoholona? Ho karazana fizarana seza fotsiny…
Hatramin’izao, efa ho roa taona izay, mbola banga ny toeran’ny mpanohitra eny anivon’ny Antenimierampirenena, Tsimbazaza. Tsy voatery ho solombavambahoaka tsinona izany mpanohitra izany, fa ireo antoko sy vondrona politika mpanohitra no mifidy izay ho solontenany eo anivon’ny Antenimierampirenena.
Mahatonga ny toerana ho banga eny Tsimbazaza ny tsy fisian’ny mpanohitra mazava? Tsy mahay mifanaraka ireo izay heverina ho mpanohitra ivelan’ny fitondrana. Na tsy misy izay tena hoe mpanohitra amin’ireo solombavambahoaka, mivadibadi-kevitra be ihany arakaraka ny zava-mitranga fotsiny.
Fanoherana araka ny tombontsoa na ny zava-mitranga fotsiny no miseho, fa tsy araka ny foto-kevitra sy ny fandaharanasa.
Fombafomba fotsiny ny hoe fisokafana
Hafa noho izany ny eny anivon’ny Antenimierandoholona, loholona mpikambana no eo amin’ny toeran’ny mpanohitra: atao filoha lefitra fahafito, araka ny volavolana fitsipika anaty amin’izao. Araka ny And. 78 ao amin’ny lalàmpanorenana rahateo, manana zo amin’ny toeran’ny filoha lefitra iray ny mpanohitra ary mitarika ny iray amin’ireo vaomiera farafahakeliny.
Iza no haka izay toerana iray ho an’ny mpanohitra izay eny amin’ny lapan’Anosikely? Ny loholona avy amin’ny Mapar sa ny Tim? Na ny avy amin’ny tsy miankina nolanin’ny mpifidy vaventy na notendren’ny filohan’ny Repoblika… Tsy tokony ho banga ny toeran’ny mpanohitra, nefa ahina ho karazana fombafomba na fanomezana seza fotsiny.
Eo amin’ny lafiny fifandanjan-kery politika, manjaka tokana ny HVM: fombafomba sy fisehoana fotsiny ny hoe fisokafana amin’ny hery politika hafa. Amin’ny firehan-kevitra indray: hafahafa ihany raha ho mpanohitra eny anivon’ny Antenimierandohona ny Mapar na ny Tim, ohatra. Nefa ho mpanohana fitondrana na tsy hita ihany izay tena foto-keviny sy ny toerany eny anivon’ny Antenimierampirenena.
Hafahafa ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara, na eo amin’ny firehana sy foto-kevitra ihany aza?